Tag: email kushambadzira nenhamba
Email Kushambadzira Mafomura uye Zviratidzo Zvakakosha
Mugovera, June 23, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vatsva uye vane ruzivo vatengesi veemail vanofanirwa kunzwisisa iwo akakosha mametric ekuongorora avo vanyoreri nemishandirapamwe. Heano kuputsika kweakakosha Email Kushambadzira mameturu pamwe nemaitiro ekuaverenga.
Shamwari yangu yakanaka, Chris Baggott, ave kuda kuburitsa bhuku rake rekutanga, Email Kushambadzira Nenhamba. Chris akanyora bhuku naAli Sales, imwe shamwari yangu. Chris mubatsiri wekutanga muExactTarget, iyo kambani yandinoshanda nayo seManeja Chigadzirwa. Chris's blog (pamwe nevamwe vatungamiriri vanoshamisa nevashandi) vakasundira ExactTarget mu stratosphere - inonzi imwe yemakambani eInc anowedzera nekukurumidza munyika. Kwete ini chete